फ्रिजको भर नपरौं | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← लालीगुराँस पायल म्युजिकल शो’मा सहयोग गर्नुहुने सबैलाई आयोजकको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद !!
एनआरएनए क्यानाडाको स्वागत तथा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न →
दसैंमा सजिलोका लागि टन्न खानेकुरा बनाएर फ्रिजमा राखी अनुकूलता अनुसार उपयोग गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने होसियार ! रोगको शिकार पनि हुन सकिन्छ । चिकित्सकका अनुसार फ्रिजमा खानेकुरा राख्दा पोषणतत्त्व र भिटामिनमा कमी त आउँछ नै रोग संक्रमणको सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ । फ्रिजजमा हेपाटाइटिस फैलाउनेलगायत भाइरसहरू जीवितै रहन्छन् । खानेकुरा लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सकिए पनि कीटाणुरहित बनाइराख्न सकिँदैन । खाद्य पदार्थलाई फ्रिजमा जमाउँदा समेत सबै ब्याक्टेरिया मर्दैन । फ्रिजले ब्याक्टेरियाको वृद्घिलाई मात्र रोक्छ ।
चिकित्सकहरूका अनुसार बढ्दो तापक्रम र सरसफाइलगायत नियमित प्रक्रिया अभावमा फ्रिजमा विश्वास गर्नु स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्नु हो । फ्रिजमा सूक्ष्म जीवाणुले बास गर्नेमात्र नभई थुपै्र रोगसमेत निम्तने सम्भावना रहन्छ । सम्पन्न व्यक्तिको भान्छा कोठामा फ्रिज अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ । तर फ्रिजमा खानेकुरा राख्नेलगायत प्रक्रिया’bout सही जानकारी अभावमा खाद्यमा विषाक्तता, एलर्जी, पेटसम्बन्धी रोग निम्तने गर्छ । धेरैजसो व्यक्ति फ्रिजमा खाना राख्नाले ताजा रहिरहने विश्वास गर्छन् तर यो धारणा सही होइन ।
अमेरिकास्थित फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) का अनुसार फ्रिजभित्रको तापक्रम ४० डिग्री फरेनहाइट र माइनस १८ डिग्री सेन्टिग्रेटमा स्थिर रहनुपर्छ । यदि तापक्रम ४० डिग्री फरेनहाइटभन्दा बढी भए खाद्य पदार्थजन्य रोग फैलाउने ‘लिस्टेरिया’ नामक ब्याक्टेरिया फ्रिजमा वृद्घि हुन सक्छ । नियमित रूपले फ्रिजभित्र उपयोग गर्न सकिने थर्मामिटर राखेर तापक्रम परीक्षण गर्नुपर्ने समेत एफडीएले जनाएको छ । सूक्ष्म जीवाणु धेरै कम तापक्रममा निष्क्रिय रहन्छन् ।जसै तापक्रम वृद्घि हुँदै जान्छ, ती सक्रिय हुन थाल्ने उल्लेख गर्दै इपिडिमियोलजिस्ट डा. मानसकुमार बनर्जीले भने, ‘फ्रिजमा राखिएको खानाको गुणस्तर कम हुनुको साथै खाद्य पदार्थमा भएको भिटामिन र अन्य पोषकतत्त्वमा समेत कमी आउँछ ।
हेपाटाइटिस फैलाउनेलगायत भाइरस जीवितै रहन्छन् । ‘एफडीएका अनुसार खाद्य पदार्थलाई फ्रिजमा जमाउँदा समेत सबै ब्याक्टेरिया मर्दैन, केवल ब्याक्टेरिया वृद्घिलाई मात्र रोक्न सकिन्छ । अमेरिकास्थित नेसनल इन्स्टिटच्युट अफ डाइविटिक्स एन्ड डाइजेस्टिभ एन्ड किड्नी डिजिज (एनआईडीडीके) को ब्याक्टेरिया र खाद्य पदार्थजन्य रोगसम्बन्धी तथ्य पत्रअनुसार ब्याक्टेरिया ४० डिग्री फरेनहाइटदेखि एक सय ४० डिग्री फरेनहाइटसम्मको तापक्रममा गुणात्मक रूपमा वृद्घि हुन्छ । एनआईडीडीकेका अनुसार बनाइएको खाना दुई घन्टाभन्दा बढी समय कोठाको तापक्रममा राखेपछि खान सुरक्षित मानिँदैन । त्यसैले तपाईंको फ्रिजभित्रको तापक्रम ४० डिग्री फरेनहाइटभन्दा कम र फ्रिजभित्रको तापक्रम शून्य डिग्री फरेन हाइटभन्दा कम हुनुपर्छ । ‘जतिखेर तपाईंलाई शंका लाग्छ कि फ्रिजभित्रको खाना खराब भएको छ भने त्यसलाई फ्याँक्नु नै सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो,’ समुचित रूपले उपयोग नगरिएको फ्रिजजले गर्दा विभिन्न समस्या देखिने उल्लेख गर्दै रोग विशेषज्ञ डा.प्रदीपकुमार यादव भन्छन् ।
एफडीएका अनुसार कुनै पनि पदार्थ जो सुँघ्दा वा हेर्दा शंकास्पद लागोस्, त्यसलाई फ्याँक्नुस् । फ्रिजभित्र र बाहिर नियमित सफा गरेमा लिस्टिरियालगायतका ब्याक्टेरियाको वृद्घि रोक्ने एफडीएले उल्लेख गरेको छ । फ्रिजभित्रको खुल्ला सतहमा कीटाणु एकत्रित हुने भएकाले यसको सफाइ अत्यावश्यक छ । फ्रिजमा संग्रह गरिएका खाद्य पदार्थलाई खुला राख्न नहुनेसमेत विज्ञहरू बताउँछन् । यसलाई वायु अवरुद्घ भाँडो (एयरटाइट कन्टेनर) मा सुरक्षित राख्नु राम्रो हुन्छ ।फ्रिजमा जम्मा गरिएका खाद्य पदार्थलाई उपयोग गर्नुभन्दा अघि पुनः तताउनुपर्छ । यसले कीटाणु नष्ट हुन्छ । जुन खानालाई फ्रिजमा दुई-तीन घन्टासम्म राखिन्छ, त्यसलाई पस्किँदा तापक्रम उमाल्ने बिन्दुसम्म पुग्ने गरी तताउनुपर्छ । यस्तै, फ्रिजमा एकत्रित खानाको उपयोग एक/दुई दिनभन्दा बढी गर्नु हुँदैन । बत्ती जाँदाफ्रिज र फ्रिजको ढोका सकेसम्म बन्द राख्नुपर्छ । एफडीएका अनुसार तपाईंको फ्रिजले यस्तो अवस्थामा करिब चार घन्टासम्म खानालाई चिसो राखिराख्छ ।